CL: Atletico Madrid oo guul ka gaartay kooxda Leicester City oo marti u ahayd lugta hore ee siddeed dhammaadka koobka horyaallada Yurub… + SAWIRRO – Gool FM
CL: Atletico Madrid oo guul ka gaartay kooxda Leicester City oo marti u ahayd lugta hore ee siddeed dhammaadka koobka horyaallada Yurub… + SAWIRRO
(Madrid) 12 Abriil 2017 – Kooxaha Atletico Madrid iyo Leicester City ayaa markoodii ugu horreeyey caawa ku kulmay koobka horyaallada Yurub ee Champions League waxaana guul gaartay kooxda reer Spain ee Atletico.
Atletico Madrid ayaa lugta hore ee siddeed dhammaadka Champions League oo ay soo dhowaysay naadiga xafidanaysa horyaalka Premier League waxaana ay uga badisay 1-0.
Atletico Madrid ayaa goolka qura oo ay uga badisay Leicester waxa uu ahaa rigoore uu Marc Albrighton uu ku galay Antoine Griezmann, waxaana gool u bedelay isla Griezmann qudhiisa 28’daqiiqo qeybtii hore ee ciyaarta, 1-0 ayaana lagu hoggaamiyey Leicester.
Inkastoo qeybtii hore ee dheesha ay biraha garaacday Atletico Madrid, haddana kulanka ayaa lagu kala nastay 1-0 looga gacan sarreeyey Leicester City.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay fursado goolal loo filan karay ayey sameeyeen labada kooxood laakiin ma suuro galin in kooxina ay qeybta labaad gool dhaliso kulanka ayaana ku soo dhammaaday 1-0 ay ku badisay naadiga reer Spain.
Kooxda u soo baxaysa afar dhammaadka Champions League waxaa go’aamin doonta natiijada ka soo baxda lugta labaad oo ka dhici doonta dalka Ingiriiska.
Cristiano Ronaldo oo RIKOODH cusub ka dhigay tartamada yurub
CL: Kooxda Real Madrid oo ka soo badisay Bayern Munich oo kaarka cas laga qaatay, xilli labo jeer uu shabaqa soo taabtay Cristiano Ronaldo… + SAWIRRO